आरुघाटका सबै सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाई - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
आरुघाटका सबै सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाई
Published On : १८ चैत्र २०७४, आईतवार ०६:५८
शैक्षिक सत्र २०७५ बाट जिल्लाको आरुघाट गाउँपालिकाको सबै विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन हुने भएको छ । विद्यार्थीहरु अंग्रेजी माध्यमकै कारण सामुदायिक विद्यालय छोडेर निजी बोर्डिङ स्कूलमा जान थालेपछि गाउँपालिकाले यस्तो तयारी गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख पूर्ण बहादुर दाहालले जानकारी दिए ।
‘हाम्रो गाउँपालिका भित्र ४४ वटा विद्यालय छन् यि सबैमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु हुन्छ’ दाहालले भने ‘हामीले १ कक्षा देखि अंग्रेजी माध्यमको पढाई सुरु गर्न लागेका हौँ । यो वर्ष सबै विद्यालयका कक्षा १ देखि सुरु हुन्छ अर्काे वर्ष माथिल्लो तहमा पनि हुन्छ । जनशक्ति हुने विद्यालयहरुमा यसै वर्ष पनि माथिल्लो कक्षाहरुमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाई हुन्छ ।’ नेपाली र सामाजिक विषय बाहेकका सबै विषय अंग्रेजी माध्ययमबाट पढाई हुने दाहालको भनाई छ ।
सरकारी विद्यालयमा पढाउने, छोराछोरी निजिमा पढाउनेहरुका लागि अनिवार्य सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको उनले बताए । ‘यसमा केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ’ उनले भने ‘हामीले आफुलाई आफुले पढाएको विश्वास नलागेर बोर्डिङमा मास्टरले छोराछोरी पठाएको हेर्नु पटक्कै छैन । गाउँको विद्यालय दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्षम छन भन्ने देखाउनु छ ।’ आरुघाट गाउँपालिकाको धारापानी माध्यमिक विद्यालयमा भने यस अघि देखि नै अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुँदै आइरहेको छ । गाउँपालिकाले विद्यालय भर्ना अभियान, नजिका प्रकाशन मिति र कक्षा सञ्चालन मिति समेत सार्वजनिक गरेर काम अघि बढाएको उनले बताए । उनका अनुसार सबै तहको परिक्षाको नतिजा आगामी चैत २९ गते प्रकाशन गर्ने तयारी छ । त्यस्तै गाउँपालिका भित्रका सबै विद्यालयहरुमा बैशाख २ गतेबाट विद्यार्थी भर्ना अभियान र नौ गतेबाट कक्षा सञ्चालन हुनेछ । आरुघाट गाउँपालिकाले अन्य विभिन्न उदाहरणिय कामहरु पनि गरिसकेको छ । पैसा नभएरै घर बनाउन नसक्ने भुकम्प पिडितलाई घर बनाउन कोष स्थापना गरेर घर बनाउन प्रोत्साहन समेत गरेको दाहालले बताए ।
विद्यार्थी खोज्दै विद्यालय
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण कक्षामा नियमित रूपमा उपस्थित हुन नसकेका विद्यार्थीको कसरी खोजी गर्ने भन्ने
कोभिड–१९ को महामारीपछि विशेष गरी विद्यालय तहका बालबालिका पूर्ववत् सिकाइ वातावरण, स्वच्छ मनोरञ्जन र अन्य
विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ३१ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय पुनःनिर्माण गर्न १ अर्ब ३३ करोड ६० लाख